Etu esi wụnye gam akporo 12 beta nzọụkwụ site nzọụkwụ | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | | Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
Ihe mbụ beta nke gam akporo 12 nọrịịrịrị anyị niile nwere ọtụtụ ihe ọhụụ na-atọ ụtọ, gụnyere ịmegharị ọhụụ ọhụrụ na atụmatụ ndị dị mkpa. Ọtụtụ puku ndị nwere ihu ọma ga-abụ ndị mbụ ga-anwale ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị igwe niile na-akwado ụdị nke iri na abụọ nke sistemụ mkpanaka Google. Mụta otú iji wụnye Android 12 nzọụkwụ site nzọụkwụ na nkuzi a.
Mgbe nyocha atọ maka ndị mmepe, Google ekwuputala ụdị nke ọzọ na mmemme Google I / O ma mee ya na atụmanya dị ukwuu maka nnukwu itu ọ ga-ewe na nsụgharị ndị gara aga. Mmepe ahụ ga-abụ usoro ịgba ọkụ n'ọtụtụ betas nke ga ahapu rue na ikpeazu nke gha ahu n’onwa August.
Android 12 na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ ka mmaE wezụga nke ahụ, oriri nke CPU ga-abụ 22% obere na nke a ọ ga-ekwe omume iji kwado nnwere onwe ka mma na ngwaọrụ ọ bụla. Ndị injinia arụ ọrụ ogologo oge iji mee ya usoro siri ike nke na-arụ ọrụ zuru oke na ngwa niile dị.
1 Kedu ngwaọrụ ndị akwadoro?
2 Nwere ihe egwu mgbe ịwụnye gam akporo 12?
3 Etu esi melite gam akporo 12 beta
4 Lelee ma ọ bụrụ na ị nwere mmelite ahụ
5 Etu esi wụnye gam akporo 12 aka
6 Etu esi wunye gam akporo 12 na ihe eji eji ihe omuma
7 Nhazi usoro 12 gam akporo
Kedu ngwaọrụ ndị akwadoro?
Ngwaọrụ Pixel ndị a na-akwado beta ọ bụla nke Google wepụtara ụlọ ọrụ kachasị ugbu a. Enwere ike nwalee gam akporo 12 site na Pixel 3 n'ihu, Pixels tupu ụdị a agaghị enwe ohere ọ bụla ịwụnye ya n'ihi na ha enweghị nkwado.
Google nyere ndị nrụpụta ndị ọzọ ohere ịwụnye ụdị ọhụụ ahụ, maka oge ahụ n'agbanyeghị ihe dị ka iri a ga-abawanye na betas niile dị iche iche. Na nke a, enwere ike ịhụ na ihe ha na-ekwu ga-abụ nsụgharị a nụchara anụcha nke gam akporo ga-arụ ọrụ Ruo ugbu a.
Pi Kwekọrọ n'Ozizi Pixel phones are:
A na-enwekwa ike itinye gam akporo 12 na ụdị ekwentị ndị ọzọ amaara ama, gụnyere ASUS, Oppo, OnePlus, Sharp, Realme, Vivo, TCL, Tecno, Xiaomi na ZTE. Dị ka Pixels, a ga-enwe ụdị ole na ole na-akwado beta mbụ nke nsụgharị ahụ, na mgbakwunye, ekwuputala ekwentị mbụ dakọtara na ha bụ ndị a:
Xiaomi: Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11I, Xiaomi Mi 11 Ultra na Xiaomi Mi 11 Pro
TCL: Nyochaa 20 Pro 5G
Nkọ - TBD
OnePlus: OnePlus 9 na OnePlus 9 Pro
Realme: kpebisie ike
Ndụ: iQOO 7 Akụkọ Mgbe Ochie
Oppo: Oppo Chọta X3 Pro
Google na peeji nke Onye Mmepụta gam akporo na-akwado ma ọ dịkarịa ala ekwentị ndị a kpọtụrụ aha, ọ bụ ezie na a ga-amụba ha na ọnwa ole na ole sochirinụ. Ọtụtụ ndị nrụpụta nwere oge iji gosipụta ngwaọrụ ndị ga-enwe ike ịwụnye gam akporo 12.
Nwere ihe egwu mgbe ịwụnye gam akporo 12?
Ha dị ntakịrị, ọ bụ ezie na maka nke a ọ dị mkpa ịnakwere ihe egwu nke nbudata ahụ na nwụnye iji malite ịnwale ụdị mbipute siri ike ọ bụla n'agbanyeghị na ọ nọ na beta. Google ga-ewepụta ọtụtụ betas, yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya ile ndị nke mbụ anya mgbe ụdị nke mbido.
A ga-ebudata ngwugwu melite ahụ site na iji kọmputa, wee bufee ya site na eriri USB na nchekwa ekwentị. Achọrọ otu data niile ka ị ghara idafu ihe ọ bụla n'ụzọ, ọ bụrụ ihe onyonyo, vidiyo na akwụkwọ ndị ahụ dị mkpa.
Ọ dị mma ịnyefe data a niile na kọmputa, Nhọrọ ọzọ bụ ịhapụ ozi na ọrụ ndị ọzọ, otu n'ime ha bụ Google Drive, Terabox, na ndị ọzọ. Mepụta folda iji dobe ihe niile n'usoro, iji nyefee ya na mkpanaka ahụ n'ụzọ ọsọ ọsọ.
Etu esi melite gam akporo 12 beta
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịbanye ibe weebụ site na mmemme gam akporo Beta, ozi ozugbo ọ banyere na-ekwu, sị: «Nyere anyị aka ka ụdị ọzọ nke gam akporo kachasị mma ruo ugbu a». Ule di nkpa ma oburu na ichoro chinchi, beta nke mbu ezughi oke ma otutu bu ndi gha enyere ezighi ezi obula ha huru n’ime izu uka eji.
Pịa na "Banye" iji banye maka beta na akaụntụ Google gị, ọ ga-adị mma ka ị mee ya na isi ihe ga-eme ma emechaa. Ọ bụrụ na ị banyela mmemme beta n’elu ọ dị mma were otu akaụntụ ahụ ọ bụghị nke ọzọ, ị ga - esonye n'otu email ahụ.
Nke mbu bu lelee ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị dị mma Mgbe ị na-emelite, ọ dịkarịa ala otu n'ime ekwentị ndị dị na ndepụta ahụ achọrọ, ụdị ọzọ adịghị mma. Google ga - enwe ike ịme ihe dị mkpa n'ezie ma ọ bụrụ na ị jikwaa na-eyi ya dị ka nke ọma dị ka o kwere na mmelite n'ọdịnihu.
Peeji ahụ ga-agwa gị ka ị nakwere ọnọdụ nke iji iji mezue ndebanye aha, ya mere, ọ dị mkpa ịme ya ọtụtụ oge. N'ihe dị ka otu ụbọchị, ị ga-enweta mmelite na Beta dị ka a ga - asị na ị gbanwere mmelite na ngwaọrụ ahụ.
Lelee ma ọ bụrụ na ị nwere mmelite ahụ
Ozugbo ị jụrụ imelite beta ọ na-atụ aro lelee aka ma ọ bụrụ na ịnata beta mbụ nke gam akporo 12Ime ya aka gi bu ihe amamihe mgbe nile. Mgbe ụfọdụ ọ naghị eme ya akpaka, yabụ ọ kacha mma ịchọ ya ma ọ bụrụ na inwee ya, soro usoro a ga-eburu ya na iri na abụọ.
Nzọụkwụ iji lelee mmelite ahụ emere dị ka ndị a:
Nweta Ntọala na ngwaọrụ mkpanaka gị
Ugbu a pịa System wee pịa Advanced
Na-akwụsị pịa "Mmelite sistemụ" ma ọ ga-achọ ya ntakịrị oge karịa, ọ bụrụ na ọ nọghị ya ọ kachasị mma ichere ntakịrị oge
Etu esi wụnye gam akporo 12 aka
Nhọrọ ntuziaka nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anyaN'agbanyeghị nke a, ọ bụ otu n'ime ndị ahụ ejiri mee ihe ọzọ na nke gọọmentị. Maka nke a, a na-eji ngwa a maara dị ka Flash Ngwá Ọrụ, ọ bụ n'efu na anyị ga-agbaso usoro ole na ole ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịwụnye gam akporo 12 na ngwaọrụ ahụ n'oge nke ngwa ahụ ga-akara.
A maara Flash Ngwá Ọrụ ịbụ ngwá ọrụ zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye nke ọ bụla n'ime nsụgharị gam akporo, ma cheta ịlele ma ọ dị na ndepụta nke ngwaọrụ ndị akwadoro. N'oge a n'agbanyeghị ụdị ole na ole nwere ike ịbawanye dabere na onye nrụpụta.
Usoro iji budata Ngwá Ọrụ Flash na gam akporo bụ ndị a:
Budata Ngwaọrụ Flash site na akwukwọ ọrụ
Download ugbu a gam akporo 12 si peeji ahụ Gam akporo Mmepụta na-eso nzọụkwụ maka ya ụdi echichi na gam akporo Flash Ngwá Ọrụ
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ igwe dakọtara na usoro nke onye nrụpụta ọ bụla ga - arụ, ihe kachasị mma bụ gaa na web nyeere nke a Google, maka nke a cheta na ọ ga-abụrịrị dakọtara mobile, dị mkpa
Etu esi wunye gam akporo 12 na ihe eji eji ihe omuma
Ọ dị mkpa ime nkwado ndabere tupu ịwụnye gam akporo 12 na ngwaọrụ gị, cheta iji gị PC ma ọ bụ a ngwá ọrụ mmepụta oyiri ihe niile i nwere ruo mgbe ahụ. Iji eriri USB ị nwere ike iji aka gị bupụ, ma ọ bụrụ na iji Google Drive ị nwere ike ịchekwa ihe ruru 15 GB.
Iji wụnye gam akporo 12 na Flash Ngwá Ọrụ Mee ihe ndị a, cheta soro ya na leta ahụ ka ọ rụọ ọrụ ma tinye ụdị nke ọhụrụ na ekwentị:
Budata faịlụ Flash Tool site na gam akporo Developer
Mee ndị ọrụ nrụpụta ọrụ na ekwentị gịIji mee nke a, gaa Ntọala - Banyere ekwentị - Mee ọnụ ọgụgụ - ma pịa nọmba Mee ugboro asaa, ozugbo ị mere ya, ọ ga-egosi gị ozi ịdọ aka na ntị nke Onye Mmepụta Nhọrọ
Jikọọ ekwentị na PC na eriri USB wee mepee iwu njikwa
Mepee faịlụ ebudatara na kọmputa gị
Iji malite ya, jiri faịlụ flash.all rụọ faịlụ ahụ ma soro usoro iji wụnye Android 12 na ekwentị gị na nkeji ole na ole, usoro a ga-ewe karịa ma ọ bụ obere oge nke na-agaghị karịa 10 nkeji.
Nhazi usoro 12 gam akporo
Beta mbụ dị maka ụbọchị ole na ole, a ga-ahapụ nke abụọ n'oge na-adịghị anya, yabụ a ga-ahụ mmezi na ozi ndị ọzọ na mmelite niile. Anyị enweela ụbọchị maka betas ndị na-esote, ụdị ndị a na-aga na nke ikpeazụ, nke ga-ahụ ka ọ dị na August.
Google choro na nke a iji bulie ngwa ngwa nke oma, odi nma ma megharia ohuru nke sistemu a, ya na interface nke oge di iche na ihe anyi huru ugbu a. Usoro ihe omume maka mmelite ndị na-esote ga-abụ nke a, dịgasị iche dabere na Google ruru ha:
June: beta nke abụọ ka a ga-ewepụta n'otu ọnwa, tupu ngwụcha ọnwa a
July: Google ga-ebido beta 3 na July, otu ụbọchị ka Google ga-akwado ya
Izu mbụ nke ọnwa Ọgọstụ: Thelọ ọrụ a ga-ebido beta 4, ọ ga-abata n'ọnwa ikpe, ọkachasị n'ihi na enwere ọtụtụ akụkọ gbasara sọftụwia ahụ.
Banyere August: ụdị a maara dị ka onye nyocha ga-abata mgbe beta 4 gachara, ọ bụ oge iji hụ otú ọ dị
Tupu ngwụsị nke ọnwa Ọgọstụ: tupu ọnwa agwụ, a ga-ewepụta mbipute a, mbipụta ikpeazụ, nke anyị ga-ahụ na igwe Pixel ma na ụdị ekwentị, mana iji ahaziri nke ọ bụla n'ime ha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Etu esi wụnye gam akporo 12 beta nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ngwa 10 kachasị mma iji gụọ akwụkwọ na gam akporo